Kuvaka dhizaini uye AutoCAD software portal
Mhinduro Yekukurumidza: Iwe unowedzera sei fenicha kuRevit modhi?
Category: mwe 0
Ini ndinowedzera sei fenicha muRevit 2022? PaInsert tab, tinya kurodha Autodesk Mhuri kurodha browser. Mubrowser shandisa bhurawuza muti ku...
Ndekupi Layer Properties pa AutoCAD Mac?
Ini ndinovhura sei iyo layer zvivakwa mu AutoCAD? Tinya-kurudyi kudhirowa kweCAD, nongedzera kuCAD Drawing Object, wobva wadzvanya Properties. Dzvanya iyo Layer tab. Sarudza iyo…
Mhinduro Yekukurumidza: Ndeipi yakazara fomu yeCOM muCAD CAM?
Ndeipi yeinotevera ndiyo yakazara fomu yeCAD? Kombuta-inobatsira dhizaini (CAD) iko kushandiswa kwemakomputa (kana nzvimbo dzekushandira) kubatsira mukugadzira, kugadzirisa, kuongorora, kana…
Unoenzanisa sei zvinhu muDraftsight?
Unoenzanisa sei chinhu? Rongedza chinhu nezvimwe zvinhu Bata pasi Shift, tinya zvinhu zvauri kuda kuenzanisa, wobva wadzvanya iyo...
Ndinoita sei kuti SolidWorks ichangoburwa?
Ndinoona sei zvichangoburwa muSolidworks? Dzvanya makiyi emiseve yekuruboshwe kana kurudyi. Maonero acho anofamba zvinoenderana neincrement value yakataurwa kune arrow keys muTools...
Mubvunzo: Unogadzira sei tafura yemutsetse muCivil 3d?
Iwe unogadzira sei tafura yekuenzanisa muCivil 3d? Kuwedzera Kurongeka Table Dzvanya Annotate tab MaLabel & Tables panel Wedzera Matafura menyu Kurongeka Wedzera Mutsetse. Mu…
Internet Explorer 11 inotsigira SVG here?
Ko SVG inoshanda muInternet Explorer? SVG (Scalable Vector Graphics) inotsigirwa zviri pamutemo nemabhurawuza makuru ese ewebhu, kusanganisira Internet Explorer. Rutsigiro rwunopinda mumhando dzakasiyana siyana…
STL inomiririra nyika ipi?
Chii chinonzi STL *? STL. STL ifomati yefaira yakaberekerwa kune stereolithography CAD software yakagadzirwa ne3D Systems. STL inozivikanwawo seStandard…
Iwe unoratidza sei misa zvivakwa muSOLIDWORKS?
Iwe unoratidza sei zvivakwa muhuwandu? Unokwanisa kuona zvakaverengerwa zvimiro zvehuremu.…Kuratidza zvimiro zvehuwandu: Sarudza zvinhu (zvikamu kana miviri yakasimba) kuti zviongororwe. … Tinya…
Iwe wakabvunza: Unogona kupinza DXF muSolidworks?
Unogona kushandura DXF kuita chikamu cheSOLIDWORKS? dxf). Bhurawuza kune faira, wobva wadzvanya Vhura. Iyo modhi inoshandurwa ipapo kuita SOLIDWORKS chikamu, kana iyo…
Mhoro! Ini ndinonzi John. Ndiri injiniya uye mugadziri. Ndinoda kugovera ruzivo rwangu uye pfungwa dzinokosha dzinodiwa panotanga chero kuvaka.
Ndinoziva sei kana faira rangu riri ANSI kana UTF 8?
Ini ndinodzika sei dhirowa mu AutoCAD?
Wakabvunza: Sei chipembere chichireva mari?
Ini ndinobuda sei muBoka Rongedza modhi muRevit?
Ini ndinotsvaga sei chirongwa mu AutoCAD?
Mubvunzo wako: Unochengetedza sei chiitiko muSolidworks?
Mubvunzo wako: Shumba dzinodya tsvina yezvipembere here?
TARIRA KUNE VAKARUDZERA! Zvese zvinhu zvinoiswa pane ino saiti zvine chekuita neruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchitenda kuti kutumira kwechero chinhu kutyora kodzero yako, ita shuwa kutibata nesu kuburikidza nefomu rekuonana uye zvinhu zvako zvichabviswa!